भारतीयहरू बरबराउँदै भन्न थाले ‘भारत-चीन सिमाना वीरगन्ज भयो’ - Aarthiknews
विहीबार, ०१ साउन २०७७ Thursday, 16 July, 2020
भारतीयहरू बरबराउँदै भन्न थाले ‘भारत-चीन सिमाना वीरगन्ज भयो’
काठमाडौँ । भारतको मिजोरम राज्यका पूर्व गभर्नर तथा पूर्व विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजका पति स्वराज कौशलले नायिका मनीषा कोइरालालाई नेपाल-भारत सम्बन्धमा किन चीन घुसाएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । नेपाल बिरुद्द आफ्नो ट्विटरमा निकै सक्रिय बनेका उनले नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, धर्म निरपेक्षता लगायतका धेरै विषयमा आपत्तिजनक प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै मनीषा कोइरालाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको ट्विटमा प्रतिक्रिया जनाएपछि भारतीय सञ्चारमाध्यम र नागरिक समेत उनी बिरुद्द आक्रोशित बनेका छन् । आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै स्वराज कौशलले भावुक ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘मेरी बच्ची म तिमीसँग विवाद गर्न सक्दिन । तिमीलाई मैले जहिले पनि आफ्नै छोरी जस्तो व्यवहार गरेँ । जब तिमीले हामीलाई ‘१९४२ अ लभ स्टोरी’को प्रिमियममा बोलाएकी थियौ मैले पुरै फिल्म हेर्न पाइन । हो, सुष्मा स्वराजले फिल्म हेरिन् अनि त्यो बेला बाँसुरी (सुष्मा र कौशलकी छोरी) तिम्रो काखमा थिइन् ।’
त्यसपछि अर्को पोष्टमा गरिएको प्रश्न भने आपत्तिजनक नै छ । जहाँ उनले सोधेका छन्, ‘भारतको नेपालसँग असहमति हुन सक्छ, नेपालको भारतसँग गम्भीर विषय हुनसक्छ । जे भएपनि त्यो नेपाल र भारत बिचको हो । तिमीले चीनलाई किन बिचमा ल्यायौ ? त्यो हाम्रो लागि खराब हो । अनि त्यो नेपालको लागि समेत ठिक होइन ।’
उनले अगाडी भनेका छन्, ‘जब तिमीले चीनलाई ल्यायौ तिमी हामीसँगको हजारौँ वर्षको बन्धन तोड्दै छौ । तिमी हाम्रो साझा इतिहास नष्ट गर्दैछौ । सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त तिमी आफ्नो सार्वभौम मुलुकको स्तर पनि घटाउँदै छौ ।’ उनी थप आपत्तिजनक बनेका छन्, ‘अब हामी हाम्रो दिमागबाट यो कुरा निकालौँ । नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डता पवित्र छ । हामीले त्यो अनन्त सम्म सम्मान गर्नुपर्छ ।’
उनले आफ्नो ट्विटमा मनीषाका पिता प्रकाश कोइरालासँगको सम्बन्ध र नेपालको राजनीतिमा उनको प्रत्यक्ष सहभागिताको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘भारतीयले बुझ्नुपर्छ कि विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्रलाई खत्तम गर्ने षड्यन्त्र थियो । तिनीहरूले माओवादीसँग सहकार्य गरे । तिनीहरूले प्रचण्ड र बाबुरामलाई यहाँ सुरक्षित घरमा राखे । तिनीहरूले एक मात्र हिन्दु राष्ट्र खत्तम गरे । उनीहरूको मिसन पुरा भयो ।’ उनी थप लेख्छन्, ‘परिणाम यो भयो कि कम्युनिष्टहरुले भारत बिरुद्द चीनलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । वा, चीनले भारत बिरुद्द कम्युनिस्टलाई प्रयोग गरिरहेको छ । परिणाम परम्परागत रूपमा चीनको भारतसँगको सिमाना हिमालयसम्म थियो । अहिले चीनको भारतसँगको सिमाना वीरगन्जमा छ ।’
भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट २७ हजार बढी नेपालीको उद्धार
रिपोर्टर डायरीः ‘रिपोर्टिङमा हिँडेपछि आफ्नै टोल पस्न दिइएन्’
निजी विद्यालय सञ्चालकको निर्णयः अनलाइन कक्षा बन्द, शिक्षकलाई बेतलबी बिदा
आधा पनि भएन पुँजीगत खर्च, विकास निर्माणको २ खर्ब बजेट त्यतिकै
यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न आग्रह
खर्बको सिमेन्ट उधारोमा गएपछि उद्यमीले लिए यस्तो निर्णय
जापानको अर्थतन्त्र अर्को वर्ष ४.७ प्रतिशत खुम्चिने केन्द्रीय बैंकको भनाई
अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीलाई दिइन भिसामा फेरि नयाँ नियम लागू
मारवाडी समूदायद्वारा एक करोड मानिसलाई रोग प्रतिरोधात्मक औषधि निःशुल्क वितरण
२४ कम्पनी विरुद्ध साढे ६ अर्बको मुद्दा दायरा, कवाडी सञ्चालन गर्ने मात्रै १६ कम्पनी
मितेरी डेभलपमेण्ट बैंकको बोनस शेयर सूचीकृत
ट्रक व्यवसायीको समस्या यसरी समाधान गरिने हुने भयो
नेपाल लाइफलाई शिखरमा पुर्याएर विदा लिए सीईओ झाले
सवा खर्ब खर्चलाई महालेखाले मान्यता दिएन, घट्यो बेरुजू
कसरी फुट्यो मेलम्चीको मुख्य गेट ?
जसलाई दिल्लीले नेपाल हेर्ने जिम्मा दियो
काठमाडौंमा थप ७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
सामसुङ ग्यालेक्सी ए२१एस फोन नेपाली बजारमा, कति छ मूल्य ?
३ अर्ब ८२ करोड राजस्व छलि गर्ने फर्म विरुद्ध मुद्दा
‘प्रधानमन्त्रीको स्वीस बैंकमा खाता छैन’
क्षमता बढाउन सीजी सिमेन्टले थप्यो ऋण, १० बैंकले गरे ९ अर्ब लगानी
‘ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउँछौं ’
चिनियाँ एप प्रतिबन्धले भारतमा अर्को एपको भाग्य परिवर्तन, कहिल्यै नचलाउनेले पनि गरे डाउनलोड